Express PCB, Flex-Ngesandla Esiqinile PCB, PCB UMHLANGANO - PhiliFast
Turnkey PCB & PCBA Ukwakha kanye Assembly
I-RF microwave PCB enesiphetho seFlash Gold Surface ...
nezimo pcb 6 Layer fpc Nezimo-Ngesandla Esiqinile PCB indoda ...
Inkonzo yesekethe yebhodi yesekethe kagesi ...
Amakhulu amakhasimende anelisekile
I-PHILIFAST ingumkhiqizi webhodi lesifunda ohlinzeka ngezinsizakalo eziningi zokukhiqiza zebhodi lesifunda. Njengomhlinzeki wokumiswa okukodwa we-PCB kanye nomhlinzeki wesevisi oneminyaka engaphezu kweyishumi yomlando wokungenisa nokuthekelisa, Ngemizamo ehlangene yabo bonke abasebenzi, i-PHILIFAST ithuthuke yaba ngumholi wezobuchwepheshe webhodi wesifunda waseChina ophrintiwe.
I-PHILIFAST inikela ngezinsizakalo ezisezingeni eliphakeme zomkhiqizo wezinsimbi ze-BOM, inezinhlaka ezihlinzekwayo zokuhlinzeka ngezinto ezihlelekile nezisebenza kahle, futhi ibona umhlangano wamanani aphansi we-PCB wamakhasimende. Sineqembu lobuchwepheshe lobunjiniyela be-BOM lokubuyekeza idatha yangempela ye-BOM yamakhasimende.
INKONZO YOMHLANGANO WAMA-SMT
Inqubo yokukhiqiza yefektri ihlangabezana nezidingo zokuvikelwa kwemvelo, ifakwe imishini ehlukahlukene yokukhiqiza nokuhlola, izinyathelo ezinhle ze-electrostatic, nokuhlolwa okugcwele kwekhompyutha, okungahlangabezana nezidingo zokukhiqiza zemikhiqizo ye-elekthronikhi enembile. Yiba nohlelo lokuphatha ikhwalithi oluphelele nolwesayensi.
I-PHILIFAST ineqembu lobuchwepheshe lobuchwepheshe be-PCB kanye neminyaka eminingi yokuhlangenwe nakho okusebenzayo. Ibandakanyeka emikhakheni ehlukahlukene ye-elekthronikhi. I-PCB clone ukusebenzisa ubuchwepheshe obucwaningayo nobuchwepheshe bokuthuthuka ukuhlaziya kabusha ibhodi lesifunda, nokubuyisa amafayela we-PCB womkhiqizo wokuqala, amafayili wezinto zokwakha (BOM), amafayela wesikimu namanye amafayela wobuchwepheshe, kanye namafayili wokukhiqiza usilika we-PCB, kanye bese uphinde uzisebenzise.
I-PHILIFAST ayigcini ngokunikeza amakhasimende nge-one-stop PCB services and services services, kodwa futhi ihlinzeka amakhasimende ngezinsizakalo zokuhlela ze-IC. Ithimba lethu lobuchwepheshe lobunjiniyela lingahlela i-IC ekhethiwe ngokuya ngezidingo zamakhasimende. Amakhasimende ahlinzeka ngemininingwane ephelele yokushisa, imiyalo evuthayo, nezincwadi zamathuluzi avuthayo.
Imvamisa, ngemuva kokuthi ibhodi lesifunda lihlanganisiwe futhi kwaqedwa ukuhlolwa kwe-AOI nokubukeka, imvamisa sincoma ikhasimende ukuthi linikeze indlela ephelele yokuhlola ukwenza isivivinyo sokugcina sokusebenza ebhodini eliqediwe ngaphambi kokupakisha nokuthumela yinkampani yethu. I-PHILIFAST inethimba lobuchwepheshe be-PCB Functional Test (FCT). Ukuhlolwa kokusebenza kusenza sikwazi ukuthola nokulungisa ukwehluleka kwento ethile, ukukhubazeka komhlangano noma izinkinga ezingaba khona zokuklama ngaphambi kokuthunyelwa, futhi senze ukuxazululwa ngempumelelo nokugcinwa.
I-Shenzhen Fhilifast Electronics Co, Ltd. Yatholakala ngo-2005. Eminyakeni engaphezu kwengu-10 yentuthuko eqhubekayo, inkampani yethule imishini yokukhiqiza esezingeni eliphakeme kakhulu, futhi yasungula iqembu lobuchwepheshe lobuchwepheshe, yaqongelela ulwazi oluningi lokukhiqiza nokuphatha ngesikhathi sokukhiqiza. Inkampani yethu inohlelo oluphelele lokuphathwa kwekhwalithi, isethi ephelele yohlelo lokuthengwa kwempahla, futhi ikhiqize ukukhiqizwa okukhulu. Amakhasimende ethu amboza imakethe emhlabeni wonke, imikhiqizo eyinhloko nobuchwepheshe buthunyelwa ezimakethe zaseYurophu nezaseMelika. Yonke imikhiqizo ihambisana namazinga we-IPC ne-UL.
√ Yehlisa izindleko zakho: I-Turnkey PCBA Assembly; Isixazululo se-BOM sokunciphisa izindleko; Iseluleko Sobungcweti Sokusebenziseka Kwakho Kwedizayini
Ukuqinisekiswa Kwekhwalithi: ISO14001, IATF16949, i-UL Certified; I-100% AOI / E-Testing / X-ray / Software Programming and Function Test Iyasekelwa
Service Ukuhlinzekwa Kwamakhasimende Okuhamba phambili: Amahora angama-24 ku-Intanethi; Impendulo Yesikhathi Esizayo Yesikhathi Emahoreni ayi-12; Ukusekelwa Kwezobuchwepheshe
• 2018 — - Ukuvulwa kwefektri yokukhiqiza yeShenzhen PCBA ne-Turnkey.
• 2017 —— Ukunweba ibhizinisi liye entanjeni yokukhiqiza eyi-5 SMT.
• 2016—— Isitifiketi se-ISO14001.
• 2015 — Ukuvulwa kwefektri yomhlangano we-PCB eShenzhen.
• 2008 — Ukuvulwa kwemboni ye-PCB eHenan.
• 2005 —— I-PHILIFAST Electronics Itholakele.
Ama-PCB ahambisana nesitifiketi se-ISO9001, TS16949, UL, CE neRoHS. I-PCB SMT inhlangano ehambisana ne-ISO9001, i-PDCA ne-IPC-A-610E. Sikhonza amaklayenti ethu emhlabeni wonke. Uhlelo lwethu oluphelele lokuphathwa kwekhwalithi luthuthukiswa kakhulu ukuhlangabezana nemfuneko yekhasimende.
• I-ISO9001: Ukuphathwa Kwekhwalithi ka-2008
• Ukuhlolwa okungenayo okungu-100% kwe-IQC
• 100% Ukuhlolwa kwe-AOI
• 100% Ukuhlolwa kwe-E
• IPCII ne-IPCIII ejwayelekile yokwamukelwa
UMGOMO: Umsebenzi wethu ukuhlinzeka ngemisebenzi yobuchwepheshe yokukhiqiza i-elekthronikhi kanye nesixazululo esenziwe ngamabhodi wesifunda ashibhile ngezinga eliphakeme lekhasimende ngalinye lethu.
Sisebenzisana nezinkulungwane zamakhasimende minyaka yonke, siyakwazi ukuwasebenzisa kahle amakhasimende ethu:
• Ikhwalithi iqinisekisiwe
• Izindleko eziphansi zesevisi yangokwezifiso ye-PCB ne-PCBA
• Asikho isidingo se-MOQ
• 99% ukwaneliseka kwamakhasimende
• Umbuzo wonjiniyela wamahhala nokuhlolwa kwe-DFM yithimba lonjiniyela abangochwepheshe
Kungani Ukuthola Umkhiqizi Wakho we-PCB E-China
Inqubo ye-PCB ne-PCB Assembly
Ungakwehlisa Kanjani Izindleko Zakho Zokukhiqiza ze-PCB?
Ungaqala kanjani i-oda?
Sicela uthumele amafayela wakho we-PCB Gerber, amafayela we-Pick & Place / amafayela we-Centroid, ifayela le-BOM ku-imeyili yethu: sales@fljpcb.com